Ithegi: ezentlalontle | Martech Zone
Ividiyo: #Socialnomics 2014
NgoLwesithathu, Aprili 16, 2014 NgoLwesithathu, Aprili 16, 2014 Douglas Karr
#Socialnomics 2014 nguErik Qualman yinguqulelo yesihlanu yevidiyo ebukelweyo kakhulu kwiMithombo yeendaba yoLuntu. Ividiyo yalo nyaka ichaza ubunzima phakathi kwentlalo, iselfowuni kunye nokuqhushumba kokusetyenziswa kweminyaka eliwaka. Asinakho ukhetho malunga nokuba senza imidiya yoluntu. Ukukhetha indlela esiyenza ngayo kakuhle. U-Erik Qualman Oyena ndoqo koku kukuba i-20% yemigaqo echwethezwe kwibar yokukhangela ayikaze ikhangelwe
I-Mobilenomics: Ukuba awuyiSelfowuni, awuyithengisi
NgoMvulo, Matshi 25, 2013 NgoMvulo, Matshi 25, 2013 Douglas Karr
Siziva silungile xa sibona itekhnoloji isiza kwaye ikwazise kwangexesha. Oko besithetha ngokukhula kweselfowuni ixesha elingaphezulu konyaka ngoku, kodwa simangalisiwe xa sisenza uphicotho olusebenzayo lomthengi wamva nje kwaye bengenaso isicwangciso-qhinga… akukho nanye. Indawo yabo ibingaselfowuni, ii-imeyile zabo bezingalungiselelwanga iselfowuni, kwaye akukho zixhobo zeeselfowuni kufutshane ... nada. Ngamanye amaxesha kuthatha ividiyo
Ividiyo yezeNtlalontle 2013
NgoLwesithathu, Novemba 7, 2012 NgoLwesithathu, Novemba 7, 2012 Douglas Karr
U-Erik ubuyile kunye nefakelo yakhe yamva nje (yesi-4) yevidiyo yakhe eboniswa kwimidiya yoluntu. Ukuba uhlawula ingqalelo, ingxelo nganye yevidiyo yenza umsebenzi omangalisayo wokubonisa utshintsho oluye lwasasazeka kwihlabathi lonke. Nokuba iiparodi ziyamnandi. Thelekisa ividiyo ye-Social Media Revolution yonyaka ophelileyo kwaye uya kufumana uninzi lweenkcukacha-manani ezinxulunyaniswa nonxibelelwano lwangempela, lwemali phakathi kweempawu kunye nabathengi. U-Erik Qualman ngu
Ividiyo: Uhlaziyo lweMidiya yoLuntu-iParody
NgoLwesine, Meyi 24, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Sithumele uthotho lweevidiyo zosasazo lweendaba ezisekwe kwi-Socialikomics kaErik Qualman. Banengqiqo kwaye bazele ziinkcukacha-manani ezothusayo ngendlela imithombo yeendaba zentlalo etshintsha ngayo indlela esiphila ngayo, esisebenza ngayo kunye nokunxibelelana ngayo. Le parody ihlekisa kakhulu ukuba ungabelani ngayo, nangona kunjalo. Abantu bathi xa uchukumisa inyaniso… kulapho izinto zihlekisa khona. Ndicinga ukuba le vidiyo yile nto nje! Imithombo yeendaba yeNtlalontle-iParody
Yintoni iTeknoloji ebulala
NgoLwesibini, Januwari 17, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Lo ngumboniso bhanyabhanya omnandi ovela kwiSocialnomics kunye no-Eric Qualman, umbhali weNkokeli yeDijithali: 5 Iindlela ezilula zokuphumelela kunye nefuthe. Ndithatha ikota yokubulala. Nangona imisebenzi emininzi ilahlekile ngamaxesha amatsha, andithandabuzi ukuba kukho ukwanda kwenani lemisebenzi namathuba. Ngelishwa, sinemikhosi yezopolitiko neyoqoqosho ethi izame ukumelana notshintsho kunokuziqhelanisa. Ngokombono wam othobekileyo, oko kuyicothisa iyonke